Murashaxiinta Jubbaland oo loo diiday illaalo u gaar ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Murashaxiinta Jubbaland oo loo diiday illaalo u gaar ah
Murashaxiinta Jubbaland oo loo diiday illaalo u gaar ah
February 27, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Guddiga Amniga ee Maamulka Jubbaland oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa soo saaray qodobo la xariira suggida amniga magaaladaasi xiliga ay dhacayaan doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Qodobada lasoo saaray ayaa waxaa kamid ah in ciidamada amniga ee Jubbaland ay yihiin kuwa damaanad qaadaya amniga murashaxiinta Madaxweynaha Jubbaland iyadoo la sheegay inay mamnuuc tahay in murashaxiinta ay sameystaan illaalo u gaar ah.
Murashaxiinta xilka u tartameysa ee hada aan joogin guddaha Jubbaland ayaa loogu baaqay inay maamulka kusoo wargeliyaan xiliga ay dhulkaasi tagayaan si amnigooda loo sugo.
Dhinaca nidaamka ololaha ee murashaxiinta ayaa la sheegay inay qaabilsan yihiin guddiga Doorashada iyo Xaduudaha ee Dowlad Gobaleedka Jubbaland kaasi oo la sheegay in dhawaan la dhisi doono.
Maamulka Jubbaland oo bilaha soo socda u diyaar garoobaya doorashada ayaa diidan in murashaxiinta ay ciidamo gaar ah lasoo galaan magaaladaasi oo ay horey uga dhaceen dagaalo u dhaxeeya maamulka iyo kooxaha kasoo horjeeday ee ku loolamayey maamulida magaaladaasi.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale isha ku haya dhaq dhaqaaqa ay wadaan murashaxiinta la sheego qaarkood inay ku xiran yihiin Dowlada Federaalka kuwaasi oo uu doonayo inaysan ciidamo gaar ah la imaan Kismaayo.